Ho maina ny andro : hidina ny maripana eto Antananarivo | NewsMada
Ho maina ny andro : hidina ny maripana eto Antananarivo
Ho maina ny andro ary hidina ny maripana farany ambany eto afovoan-tany ao anatin’ny telo andro manaraka, satria mamaritra ny toetry ny andro ny alizay malefaka, araka ny fanazavan’ny teknisianina amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Somary haka volon’andro ririnina eto Antananarivo ao anatin’ny telo andro na mbola ato anatin’ny vanim-potoana fahavaratra aza, amin’izao fotoana izao. 12 °C ny maripana ambany indrindra any Vakinankaratra ho an’ny anio. Saika ho maina ny andro manerana ny Nosy ho an’ny telo andro ankoatra ny faritra sy distrika vitsivitsy.
Ho an’ny anio, ho avy ny orana any amin’ny faritra Sofia sy Diana miampy ny distrikan’i Manja sy Morombe. Ny ampitso, hahazo orana ny faritra Analanjirofo sy Vatovavy Fitovinany, miampy an’i Sava sy Diana. Hanorana koa eo anelanelan’i Menabe sy Melaky. Ho an’ny alarobia, hahazo orana ny faritra Bongolava, Sava sy Analanjirofo. Hiitatra amin’ny faritra Itasy sy ny faritra andrefan’Analamanga (Ankazobe izany) ny tapany hariva sy ny alina.
Momba ny fiforonan’ny andro ratsy ahina hivadika ho rivodoza, rahampitso ny filazana vaovao azo antoka amin’ny mety hisiany na tsia ka hamaritra ny toetry ny andro eto amintsika ho an’ny andro manaraka rehetra.